Col. C/llahi Yusuf oo warmo isugu dhiibaya mucaardka Muqdisho oo qaarkood dhowaan ku soo xero galay heshiiskii Cadan
Buluugleey, February 2, 2006
Col. C/llahi ayaa markii lagu soo doortay Kenya wuxuu watey qorshe ah inuu ka dhigto Baydhabo xaruuntiisa dowlada si uu uga helo Itoobiya ciidamo Soomaaliya oo gacan ka siiya qabashada koofurta Soomaaliya. Qorshahaas marna ma uusan noqon mid laga rajo dhigay, waxaana maanta si fudud ugu suurto gashay C/llahi inuu himiladisaas uu gaaro.
Col. C/llahi si uu u gaaro ujeedadaas ayuu wuxuu gadaal ka soo riixay Maxamed Dheere Iyo Prof. Geeddi, waxeyna labadaas nin cagta mariyeen Shariifka iyo hogaamiyeyaasha Muqdisho, waxaana si gaara bartilmaameed looga dhigtay mudane Qanyare oo aan waxba loo rooban.
Dhawacyadii siyaasadeed ee Maxamed Dheere iyo Prof. Geeddi ay la beegsadeen Shariifka iyo Qanyare waxey dhalisay in taladooda Muqdisho laga tixgelin waayo. Golihii degaanka loo sameeyey gobolka Banaadir ayaa ahaa wixii u dambeeyey oo Shariifka iyo Qanyare ay muteysteen tixgelin la’aan, kuna dhaliyey shaki iyo iney dhinaca kale u rogmadaan.
Col. C/llahi ayaa soo rogaal celiyey siyaasadii Shariifka iyo Qanyare si uu u siiyo fursad ay iyana markooda u geystaan dhawacyo siyaasadeed oo dhulka dhiga mucaaradka Geeddi, Maxamed Dheere iyo hogaamiyeyaasha Muqdisho. Arrintaas oo loola jeedo in beelaha degan Muqdisho aysan helin midnimo ama hogaan leh miisaan culus.
Col. C/llahi ayaa ah qofka abuuraya fidnada oo dhan, laakiin siyaasiyiinta taageersan waxey muujinayaan inuu yahay odey meel dhexe ka taagan khilaafka ka dhextaagan hogaamiyeyaasha dowlada, taas oo ah indho sarcaad lagu sameynayo beerdulucsiga lala beegsanayo marba kooxda la rabo in lagu fushado danaha loo beer laxawsanayo.
Col. C/llahi marnaba kama uusan tanaasulin in wadanka uu soo geliyo ciidamo itoobiyaana, sidoo kale kama uusan tegin inuu xilkiisa ku dhameysto marba inuu xaruun ka dhigto magaalo kale si uu u majaxaabiyo miisaanka ay ku yeelan karaan reer Muqdisho dowlada Soomaalida haddii uu soo dego magaalo madaxda Soomaaliya ee Muqdisho. Waxaa kaloo ujeedooyinkiisa ka mida in dadka reer waqooyi iyo dadka ugu badan koofurta Soomaalida aysan ku kulmin Muqdisho.